Tech bilaogy |
BOTOTRA FAHASALOHAN'NY OLON'OLOMPO manokana
FOTOTRA FOTOTRA-TENAN-TENY FANAHY PERSONALIA Tavoahangy fitaratra ho an'ny tena avy amin'i COMI AROMA. Mpanamboatra tavoahangy vera izahay ho an'ny indostria manitra sy manitra. Ny tavoahangy mahazatra anay dia napetraka tsara hanampy ny marikao. Azonao atao ihany koa ny manana ny tavoahangy fitaratra ho anao manokana namboarina ...
Afaka mitazona kosmetika lava kokoa ve ny fonosana banga?
Ny famolavolana lohan'entana fanodinana vovoka amin'ny vokatra fikolokoloana hoditra dia mampiasa ny herin'ny lohataona hisorohana ny rivotra hiditra ao anaty tavoahangy, ka hiteraka fivoahana ary hiteraka ny vokatra "tokana hivoaka fa tsy ao". Isaky ny manindry ny lohan'ny paompy ianao, ny piston kely eo ambanin'ny ...
Fa maninona no ilaina ny tavoahangy vera mainty / Amber?
Ny andraikitry ny vera mainty: ny fanakanana ny taratra ultraviolet amin'ny masoandro ary hisorohana ny otrikaina azo ahena ny loto sy ny fako. Amin'ny ankapobeny, ny tavoahangy vera mainty dia ampiasaina amin'ny vokatra fikarakarana hoditra mavitrika toy ny antioksida, fanoherana ny fahanterana ary ny fotsifotsy. Ho fanadinana ...
Fonosana fonosana fitaovana samihafa (Glass, Plastika)?
Tavoahangy plastika VS Glass vera, iza no tsara kokoa? Misy karazana fitaovana telo lehibe amin'ny vokatra fikarakarana hoditra: plastika, vera ary vy. Anisan'izany, ny plastika be mpampiasa indrindra dia mahatratra hatramin'ny 80%, arahin'ny vera, raha 8% ihany ny vy. Na dia ny fampiasana plastika aza dia highe ...
Ahoana ny fanamboarana fonosana tsy mampitony?
Fonosana Shockproof, mba hampihenana ny fiantraikany sy ny hovitrovitra ny atiny, makà fepetra fiarovana hiarovana ny fiarovana ireo fonosana ao aminy. Ny fitaovana fonosana mazàna ampiasaina matetika dia misy: plastika misy foamed, baoritra tantely, famolavolana pulp, baoritra mitafo, taratasy, ondana rivotra ary ...
Famariparitana amin'ny famokarana sy ny vidin'ny-COMI AROMA
Ny tavoahangy fitaratra ho an'ny kosmetika dia mizara ho azy indrindra: vokatra fikolokoloana hoditra (crème, lotion), menaka manitra, menaka manitra, poloney hoho sokajy fahaiza-manao vitsivitsy dia kely, mihoatra ny 200 ml ny fahaiza-manao dia zara raha ampiasaina amin'ny fanaovana tarehy. Ho an'ny entana amidy mafana miaraka amin'ny tahiry lehibe, toy ny tavoahangy menaka manitra ...
Global Market Packaging Glass Glass
Ny fikarohana sy ny tsena dia namoaka tatitra momba ny fomba fijery ny tsena fitaratra tavoahangy vera manerantany (2019-2027). Araka ny tatitra, ny tsenan'ny tavoahangy fitaratra fitaratra maneran-tany dia mitentina 63,77 lavitrisa dolara amin'ny taona 2019 ary antenaina hahatratra US $ 105.44 miliara amin'ny taona 2027. Mandritra ny vanim-potoana mialoha, ny compou ...
Olana mahazatra amin'ny fanontana pirinty amin'ny rano sy ny fanoherana mifanandrify amin'izany
Mahatonga ny famakafakana ny olana mahazatra amin'ny fanontana ny famindrana rano sy ny fikajiana mifanitsy amin'izany 1. Ny vokatra dia misy pitting, pinholes, bubble kely ary endrika misavoritaka aorian'ny famindrana rano. Famakafakana ny antony: • Toerana atrikasa tsy dia tsara, vovoka mitsingevana, vovoka ambonin'ilay fitaovana na vovoka ...
Tsena fonosana fitaratra - fitomboana, fironana ary vinavina (2020 - 2025)
Ny tsenan'ny fonosana fitaratra manerantany dia tombanana amin'ny USD 56.64 miliara amin'ny taona 2019, ary antenaina hisoratra CAGR 4,39%, hahatratra USD 73,29 miliara amin'ny 2025. Ny Glass Packaging dia fantatra ho iray amin'ireo endrika fonosana azo antoka indrindra ho an'ny fahasalamana, tsiro sy fiarovana ny tontolo iainana. Na eo aza ny fiatrehana mavesatra ...
Tsenan'ny tavoahangy fitaratra tarehy sy perfumery - fitomboana, fironana ary vinavina (2020 - 2025)
COMI AROMA Ento eto amin'izao tontolo izao ny tavoahangy tsara tarehy. Topimaso momba ny tsena Ny tsenan'ny tavoahangy vita amin'ny vera sy menaka manitra manerantany dia mitentina USD 1809.28 tapitrisa tamin'ny taona 2019 ary tombanana ho vavolon'ny CAGR 3,63% mandritra ny vanim-potoana (2020-2025). Urbanisation, mitombo isa an'arivony taona, a ...
Fa maninona no misafidy vera?
COMI AROMA Manome anao ny natiora, azo ampiasaina 100%, ampiasaina indray, tavoahangy ara-pahasalamana ho an'ny fonosana kosmetika, fonosana Diffuser. www.comiaroma.com Ny tombo-tsoa azo avy amin'ny fonosana fitaratra dia maharitra: maharitra izy io, tsy mitongilana, 100% ary azo averina tsy misy fetra, azo ampiasaina ary azo averina indray; azo antoka ny mitahiry fo ...
Ireo mpanamboatra Perfume izay tsy afaka mamofona na inona na inona.
Mihodina hatrany amin'ny teknolojia ny orinasa mba hamoronana faran'izay lafo vidy kokoa, hanitra tsy manam-paharoa azo vokarina ao anatin'ny minitra vitsy monja. Tamin'ny taon-dasa, ny developer developer hanitra avy any Soisa, Givaudan Fragrances, dia nanangana an'i Carto, fitaovana ampiasain'ny Intelligence artifisialy hanampiana menaka manitra. Mampiasa «scr touch» ...
Ny vera fitoeran-javatra dia karazan-kaopy ho famokarana kaontenera fitaratra, toy ny tavoahangy, siny, zava-pisotro ary lovia. Ny vera fitoeran-tsakafo dia mifanohitra amin'ny vera fisaka (ampiasaina amin'ny varavarankely, varavarana fitaratra, rindrina mangarahara, fitaratra fitaratra) ary fibre fitaratra (ampiasaina amin'ny insulation thermal, amin'ny fiberglass com ...
avy amin'ny admin tamin'ny 20-07-02
Fomba famokarana tavoahangy fitaratra Ny fizotry ny famokarana tavoahangy fitaratra dia atao amin'ny ozin-kaontenera fitaratra amin'ny dingana maro. Fampandehanana mafana: Ny dingana voalohany amin'ny fizotry ny famokarana tavoahangy fitaratra dia manomboka amin'ny fizotran'ny farany, izay mazàna mampiasa hafanana be hamokarana ...
Soda Lime Glass-Inona ny vera soda limime?
Inona ilay Soda Lime Glass? Ny vera sokay soda no karazan-kazo fanao matetika, mahatratra 90% ny fitaratra vita rehetra. Namboarina nandritra ny an-jatony taona maro izy io, izany dia fitambarana fototra amin'ny silica, soda ary sokay misy karazan-tsakafo ilaina ho an'ny fampiharana manerana ny karazana ...
Fantatsika rehetra ny ataon'ny mpanasitrana zavona, manondraka zavona manaparitaka vokatra, fa efa mba nanontany tena ve ianao hoe ahoana no fomba fiasa? Voalohany, tsara inona no tadiavinao ny zavonao? Miankina amin'ny vokatrao, azonao atao ny misafidy karazana misting mety aminao indrindra. Mpitifitra zavona manify manaparitaka fohy kokoa sy malama ...
Ny fahitana fonosana iray ho an'ny vokatrao dia ny ampahany voalohany amin'ny asa, ankehitriny dia mila mahazo antoka ianao fa ny vokatrao dia handalo tombo-kase sy hampihena ny lanjany ary ahoana ny fomba hanomezana ny be indrindra. Ity no isafidiananao ny fanakatonana anao. Ireto misy zavatra hodinihina rehefa misafidy fanidiana ny fonosanao. Cl ...
Ny iray amin'ireo zava-dehibe indrindra amin'ny fahombiazana amin'ny fanatanterahana ny bika tadiavinao dia ny fomba fandravahana ny fonosanao. Betsaka ny safidy isan-karazany raha ny momba ny fanaingoana sy ny famitana ny endriny, fa ireto misy vitsivitsy amin'ireo mahazatra: Ny loko miloko ao anaty lasitra dia fomba tsotra iray ilazana ...
Tena ilaina ny fonosana
Haingam-pandeha ny fanavaozana ny indostrian'ny fonosana ary tsy misy fiafarany. Ny fampifanarahana amin'ny tontolon'ny fonosana miova haingana dia mitaky fomba fisainana mialoha mba hahitana vahaolana avo lenta sy tsy manam-paharoa ary manavao izay hanomezana izay ilain'ny mpanjifanao mivoatra. Ireto ny efatra ke ...
Ny fandrefesana kaontenera roa manan-danja indrindra dia ny fahafahan'ny overflow (OFC) sy ny fahafaha-mameno (NFC). Ny fahafantarana ny fahasamihafana misy eo amin'izy roa dia afaka manampy amin'ny fisafidianana ny fonosana marina ho an'ny fampiharana anao ary hampihena ny habetsaky ny famenoana sy ny hadisoan'ny fangatahana marika. Fahafahana mihoampampana (OFC) T ...
Fanamboarana tavoahangy fitaratra
Ny kaontenera fitaratra dia manolotra vahaolana maharitra amin'ny filanao fonosana. Ny vera dia azo averina 100% ary raha namboarina araka ny tokony ho izy dia tsy hahafoana ny fahadiovany na ny kalitaony na impiry na impiry no ampiasaina indray. Ny fanodinana vera koa dia dingana mahomby sy mahomby izay afaka mamadika ny vera taloha ...